पासाङ कमाण्डर र आफु कमिसार भएर जनयुद्ध लडेको यसरी सम्झे विप्लवले : भन्छन्, ‘उहाँहरु आज कहाँ पुग्नु भयो ?’-Nepali online news portal
अनन्तजीले भनेको पनि सुनेँ । नारायणकाजीलगायत अरूअरूले भनेको थुप्रै सुनेँ । केही विश्लेषण पनि सुनेँ–हेरेँ– आफ्नै सहपाठी नेताहरू त्यहाँ छन् । कसरी विद्रोह गर्न सक्छन् ? उनीहरू सबैलाई थाहा छ भन्ने कुरा भयो । यो प्रतिकूलता हो भन्ने पनि छ । यसलाई दुई कोणबाट राखौँ भन्ने लागेको छ ः पहिलो कुरा भावनात्मक कुरा हेरौँ । यो पक्ष कस्तो छ भने बडो संवेदनशील, भावपूर्ण र तरङ्गमय विषय छ । साँचो पनि हो । हिजो सँगै लडेका, अझ त लडाइँको डिजाइन गर्ने, योजना बनाउने नेताहरूसँग आज हाम्रो कुरा टकराएको छ । उनीहरू त्यहाँ छन्, हामी विद्रोहमा छौँ । क्रान्तिमा छौँ । यो हेर्दाखेरि कहिलेकहीँ मान्छेहरूको दिमागमा त पर्दो हो भन्ने लाग्छ, के भो त यो ? कसरी आइयो त यहाँ ?